Fractional Co2 Laser Ọgwụgwọ vs. Fractional Erbium Laser Resurfacing
site ha na 20-10-20
Fractional CO2 Laser Resurfacing Otu o si aru oru: Ngwurugwu carbon dioxide (CO2) nke na-eweghachite laser iji ọkụ infrared ewepụtara site na tube jupụtara carbon dioxide iji mepụta ọnya microthermal na anụ ahụ ezubere iche. Dị ka ìhè na-etinye obi gị dum site na anụ ahụ, anụ ahụ na-agbago, na-eduga na nke ...
Bụ 1060nm Diode Laser Slimming Machine A Better Alternative N'ihi Stubborn Belly Fat, Handhụnanya ịlesụ na ndị ọzọ Isi Abụba?
Ọ bụrụ n’ị gbalịsiri ike iwepu abụba afọ na-agba isi akwara, na-ahụ maka ịhụnanya na ụdị abụba ndị ọzọ, ị ga-ege ntị na ọtụtụ mgbasa ozi telivishọn maka CoolSculpting. Mgbasa ozi ndị a gosipụtara ikike ọgwụgwọ a na-enweghị ọgwụgwọ iji wepụ abụba na-adịgide mgbe nri na mmega ahụ nwere ...
808 Mwepụ na-enweghị ntutu na-adịgide adịgide
Sapphire na-adịghị emetụ emetụ n'ahụ na-eme ka usoro ọgwụgwọ dị mma ma na-enweghị mgbu. Nchekwa Teknụzụ dị n'azụ Diode 808 laser na-eme ka akpụkpọ ahụ nwee obere lasers, na-ebelata ihe egwu nke pigmentation hyper. Fast The ngwa ngwa eji, ogologo usu obosara, nnukwu ntụpọ, na ibu-jụrụ uru ka ...